Halkee ku nool yihiin taageerayaasha ugu badan ee Man Utd markii dal dal dunida loo eego! – Gool FM
Halkee ku nool yihiin taageerayaasha ugu badan ee Man Utd markii dal dal dunida loo eego!
Raage April 3, 2016
(Beijing) 03 Abriil 2016 – Maareeyaha Manchester United ee dalkaasi China ayaa sheegay in 110 milyan oo ka mid ah 659m oo taageere oo ay leeyihiin ay ku nool yihiin dalkaasi taasoo ka dhigaysa dalka ay ugu badan yihiin taageerayaasha Man U, waloow uu sheegay inay abid adkaan doonto in kulan ka tirsan Premier League lagusoo dheelo dalkaasi.
Maareeye Richard Arnold ayaa ku adkeeysanaya in China uu muhim u yahay koritaanka suuq geynta Man UTD, oo todobaadkii tegey ku dhawaaqday inay dalkaasi booqan doonto bisha Luulyo, marka ay isu diyaariyaan xill-horaadka 2016-17.
Balse markii lagu cadaadiyey su’aal ah inay kulan rasmi ah ku ciyaari doonaan Bariga fog, wuxuu ka deeyriyey fursadda ay taasi ku dhici karto.
“Waxaannu halkaasi ku leennahay 110m ka mid 659m oo taageerayaasheenna ah oo halkan ku nool, waana qayb muhim noo ah, balse aragtideyda way adag tahay in ciyaar EPL ah oo rasmi ah lagu arko China,” ayuu ku yiri CNBC.
Muxuu ku soo idlaaday kulankii galabta ee Ethiopia iyo xulka qarankeena Soomaaliya?
"Wuxuu doonayaa inuu nagula guulaysto Champions League ka hor inta uusan aadin Man City" - Franck Ribery